Sunscreen Zebra Fabric Vagadziri & Vatengesi - China Sunscreen Zebra Fabric Fekitori
Electric White Dual Rukoko Roller Mucheka Zebra Shade inopofumadza Shades
China Roller Blind Machira
Kune mhuri, machira anogona kushandiswa kumumvuri, kuchengetedza kuvanzika, asiwo kushongedza dzimba dzavo. Nekudaro, mazhinji emaketeni matsva ane formaldehyde. Mushure mekunge maketeni matsva atengwa kumba, haakwanise kuturikwa nekukurumidza. Dzimwe nhanho dzinoda kutorwa kudzikisa zvakasara zvehydaldehyde pamaketeni asati ashandiswa zvakachengeteka. Ngatitaurei Groupeve kuti titsanangure nzira yekubvisa methanol!
Yakanaka Hutema Blackout Zebra Window Roller Blinds uye Shades Polyester Sunscreen Mucheka
UV uye Isina Mvura Roller Bofu Mucheka
Mbatya yeMbizi inopetwa kaviri, inogona kugadzirisa mwenje wedunhu uye haigare munzvimbo. Ruvara ruzere uye rwakachena, ruvara rwemachira emhando yepamusoro rwuno muchero uye runofadza, nehurefu hwemhando yekukasira uye iri risingapindiki nezuva, harisi nyore kuparara.
Iyo machira emhando yepamusoro ane flatness yakanaka, uye hapana kukombama mukombe kana kuzunguzira munzira yese yeupamhi.
Yakanaka Hunhu PVC Yakaputirwa Polyester Rainbow Maketeni Maketeni Akaviri Zebra Blind Sunshade Mucheka
Nekushandiswa kwakawanda kwemicheka yemumvuri, vanhu vane akasiyana siyana akasarudzika ekuda emumvuri PVC yakavharwa machira, pakati payo marara emuraraungu sunshade machira ane isingaite basa anozivikanwawo.
Yakakwira Yemhando Yakachipa Mutengo Wemoto Unodzosera Mbizi inopofumadza
Mabasa embizi anopofumadza machira
Kana iyo gauze uye gauze ichipindana, mwenje unenge wakapfava, unogona kudzikisira mwenje wakananga kune imwe nhanho. Kana keteni neketeni zvadzedzereka, mwenje unovharirwa zvachose, kuti pakupedzisira uzadzise chinangwa chekuvhara mwenje. Kune akawanda masitaira e Zebra blinds, uye akasiyana masitayera zvakare achave nemabasa akasiyana. Kazhinji kazhinji, aya masitayera akapatsanurwa zvichienderana nejira rinoshandiswa.
Mbatya dzemaketeni emicheka inonyanya kuve polyester, hemp uye nylon. Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemumvuri dzemicheka, dzinogona kuve dzakakamurwa kuita machira-emvuri emaketeni, machira-akafanana nemachira embizi uye maketeni akazara emvuri. Shading mhedzisiro kubva pasi kusvika kumusoro.
Yakakwirira Yemhando Yekudhinda Butterfly Jacquard Sunscreen Zebra Roller Inopofumadza Micheka
Kugadzikana kwevanhu mune yekunze mamiriro kune hukama kune zvakawanda zvinhu, uye pakati nepakati tembiricha tembiricha yenharaunda yakakosha paramende.
Muzhizha, kunonoka kwezuva radiation inopinda mukamuri kuburikidza negirazi inokonzera tembiricha yemwenje pane yakasimba nzvimbo yemukamuri iri padyo nepahwindo kuti iwedzere zvakanyanya, ipa vanhu kunzwa kwekubheka.
Munguva yechando, hwindo regirazi rine tembiricha yakadzika yepasi rinopa kunzwa kwekutonhora radiation. Panguva imwecheteyo, iyo inotonhorera mweya convection inokonzerwa nemhepo inotonhorera ichinyura padhuze nepahwindo zvakare inounza kunzwa kwekutonhora mhepo ichivhuvhuta kune vanhu vari padyo nepahwindo, izvo zvinonyanya kudzikisira kugadzikana kwevanhu.
Imba DEC Kudzima Magetsi Mbizi Roller Shutter Shade Window Roller inopofumadza Mucheka
Ruvara rweyescreen zebra inopofumadza machira haafanire kungosangana nezvinodiwa zvekushongedza kwekushongedza, asiwo teerera kune kuratidzwa kwezuva.
(1) Kana ikaiswa panze, machira erima ane simba rakasimba rekuvhara kupisa kwezuva kunopenya kupfuura machira eruvara rwakajeka nekuti ivo havafanirwe kufunga nezverima rejira. kana ikashandiswa mudzimba, micheka-yakajeka inogona kuratidza zvirinani.
Imba DEC Kaviri Inotyaira Zebra Roller Window Inovhara Shade Mucheka
Kana tasvika kunzvimbo isingazivikanwe, chinhu chekutanga chinotikwezva iko kushongedza. Kushongedza kwakanaka kunogona kutipa kunzwa kutsva. Yakasarudzika Wallpaper, ine yakanaka sarudzo yemaketeni, anogona kazhinji kuunza akasiyana kuravira kuhupenyu. Nhasi, isu tichaunza iyo yekutanga musimboti wekufananidza Wallpaper uye machira kwauri kana isu patinosarudza keteni. Ngatigadzirirei inoshamisa chiroto kushamisika kwehupenyu hwedu.
Magetsi Blinds Shandisa Double Roller Zebra Solar Blind Shades Fabric
mapofu anoita basa rakakosha mukugadzirisa ruvara uye nekugadzira mamiriro ekushongedzwa kwemba. Zvinotora zvakanyanya kuwedzera kutarisa mukushongedza. Nekudaro, hazvisi nyore kwazvo kugutsikana nekushongedza. Zvino maitiro ekufananidza machira ekucheka?
Inofananidzwa neyechinyakare solid color maketeni, iwo ekuchinjisa maketeni anonyanya kuita bonde. Iwe unogona kusarudza yakakodzera michina uye makara zvinoenderana neyakajairwa imba yekushongedza maitiro uye zvaunofarira, uye zvakare unoita inonamira nzvimbo inoshanda. Iye zvino tinokuratidza maitiro ekufananidza iwo mavara zviri nani!
Nyowani Dhizaini Kusviba Zuva uye Husiku Zebra Muraraungu Roller Blind Mucheka wekushongedza
Semi-translucent jira: inokodzera nzvimbo dzese dzehofisi, inokwanisa kutaurirana nenzvimbo yakapoteredzwa yakanaka.
Husiku Uye Zuva Rechipiri Rinopofumadza Sunscreen Zebra inopofumadza Mucheka
Roller Blind Masikati-Husiku-Zebra Shades
Jira rezuva rembizi rejira rinokanganisa hutano hwevanhu uye nharaunda yekugara, kuvandudza kusimba kwechiedza chemukati nekunyaradza kwenzvimbo yemukati, iri jira remumvuri rinoita kuti mwenje unopinda mukamuri nyoro uye wakasununguka, uye zvakare unogadzira kuravira kwechisikigo, wedzera runako yenzvimbo yemukati, uye inoita kuti vanhu vazorore, jira repakati-rinogadzirisa mwenje. Kana mapofu akavhurwa, tinogona kunakidzwa nekunze kwekuyevedza. Kana iwo mapofu akavharwa, yakasarudzika zvachose kunze, chengetedza zvakavanzika.
Kunze Manual Zebra Zuva Screen Roller Blind Sunscreen Blinds Micheka
Zebra inopofumadza inozivikanwa zvakare seyakapfava shinda inopofumadza, muraraungu inopofumadza, dimming roller blind, yakapetwa kaviri roller roller. Mucheka wakarukwa wakagadzirwa nezvidimbu zvejira uye gauze ane hupamhi hwakaenzana akapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe, akagadzwa nemumwe mugumo, uye mumwe mugumo wakakungurutswa ne shaft kugadzirisa mwenje.
Kana iyo gauze uye gauze ichipindana, mwenje unenge wakapfava, kune imwe nhanho, inoderedza mwenje wakananga. Kana jira nejira zvadzedzereka, mwenje unovharirwa zvachose, kuti pakupedzisira uzadzise chinangwa chekuvhara mwenje. Kana iwo mapofu achida kuvhurwa zvizere, iwo mapofu anogona kuputirwa zvizere. Mbizi yebofu inosanganisa kudziya kwemucheka, iko kusapusa kweiri roller bofu, uye basa rekudzikira kwemapofu. Izvo zviri nyore kushanda uye ine akasiyana mafomati emumvuri pasina kutadzisa iyo munda wekuona. Iyo sarudzo yakanaka yehofisi uye yekushongedza hwindo repamba.
Kunze Kwakatemerwa Windows Zebra Blind Roller Shades Jacquard Fabric
MagicalTex Sunscreen Mucheka Unokunda GREENGUARD Chitupa & GREENGUARD Vana & Zvikoro
GREENGUARD inonyanya kusuma yemukati emhepo mhando yemhando, ichipa chechitatu-bato kuyedzwa pane yakaderera emission yemakemikari zvigadzirwa. Inopa zviwanikwa zviine hutano zvigadzirwa uye inovandudza mamiriro emukati. Iwo ndiwo mareferenzi akajairwa uye emabhonasi zvemukati zveLEED Green Building Rating System. GREENGUARD Environmental Institute, seyakagamuchirwa uye yakabvumidzwa standard-yekumisikidza Institute neAmerican National Standards Institute (ANSI) yakagadza chakasimba chigadzirwa chakachinjika chiyero chezvose zvigadzirwa zvemukati, zvinosanganisira zvekuvakisa, zvekushongedza zvinhu, fenicha, zvigadzirwa zvepasi, zvigadzirwa zvepasi, pendi uye machira. , ekuchenesa zvinhu uye zvimwe zvigadzirwa zvevana muzvikamu zvinopfuura makumi maviri.